Sports ịkụ nzọ Strategies | Express Sports & cha cha ịkụ nzọ | Ọ bụghị na-ewe oge na All
Sports ịkụ nzọ Strategies – Nọgidenụ Gịnị ị Mmeri na Sports.expresscasino.co.uk
Ụfọdụ egwuregwu enthusiasts chaa chaa na egwuregwu naanị n'ihi na obi ụtọ nke na ọ, mgbe e nwere ndị ọzọ na-ele sports ịkụ nzọ dị ka oké njọ ego na-eme ka ọrụ.
Ịmepụta akụ na ụba na-eme ka ego anọgide site ịkụ nzọ na egwuregwu nwere ike ịbụ ihe siri ike na-arụ ọrụ, ma mgbe i nwere ụkwụ gị na ebe-jisiri ike nweta a ngosi bit nke nkà na ihe ọmụma, i nwere ike n'oge na-adịghị na-arụ ọrụ ụzọ gị elu na-eduga a dara oké ọnụ ma ntụsara.
E nwere ọtụtụ nke ike-isi lagoro ezumike nka onye na-aṅụ iyi ha elu na-akwụ ụgwọ, ego na-amụba, na ego na-eme ka ịkụ nzọ azum. Ebe a bụ ụfọdụ isi sports ịkụ nzọ azum -enyere gị aka 'ọbụna na emegide '.
Jikwaa gị Finance Ma ọ bụ Bankroll
The isi ala na-achị nke ịkụ nzọ bụ 'hapụ' nke a obere iji 'nweta ' a otutu ihe na nloghachi.
mgbe ịkụ nzọ on sports, mgbe a ga-akwadebe siphon onwe a ụfọdụ ego nke ego; makwaara dị ka 'Bankroll' na na ị dị njikere ida. Nke a bụ ego ole ị dị njikere n'ihe ize ndụ maka ibu ezi. Plan ahead and ewepụta ụfọdụ ego na ị nwere ike iji dị a bankroll maka izu, ọnwa ma ọ bụ ọbụna a oge ma ọ bụrụ na ị na-n'ime ya na a ogologo oge.
The n'ozuzu usoro maka ịga nke ọma ịkụ nzọ bụ ebe nzo na-eji 1% ka 5% gị ngụkọta bankroll. Ọ dị mkpa na ị jigide nọmba a dị ka a yardstick na nzọ n'ime àmà nke ya.
Cheta na-arapara gị nọmba na egwuregwu atụmatụ maka e nwere ike inwe ọtụtụ ugboro na anwa gị ọnwụnwa gbatịa gị n'aka, ime ihe karịrị na-agbalị nta ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụ ihe a echiche na-esetịpụrụ ndị player ego gbagbuo ndịda. Na-arụ ọrụ n'ime gị ókè na-ele anya na-eji nwayọọ nwayọọ na-amụba ihe karịrị otu oge ma ọ bụ N'ezie nke a oge.
Anọ mkpa na echiche ziri ezi
Ọfọn, M na-apụtaghị na-ada ka gị na nne gị, ma na-anọ na-aba n'anya na ọgwụ ọjọọ na-free ga-amụba ohere ndị i n'iji ohere na-eme ka ego site na atọ folds.
Ọ a sịkwa mgbe na ọtụtụ casinos na Las Vegas enye free ọṅụṅụ - na ụlọ ndị niile ndị na-agba chaa chaa? Chee echiche banyere ya!
The ngwa ngwa nke na-eme ego ma ọ bụ adịkwa ya niile nwere ike maa na-enye gị elu ma ọ bụ na-mmetụta uche gị ala. Nọrọ focussed; ekwela ka mmetụta uche gị na-ahụ mma nke ị. Cheta, na agiler na focussed ị na-, mma mkpebi na ndị ọzọ ego ị na-eme.
Ime gị rụọ n'ụlọ Right
Sports ịkụ nzọ Strategies Blog Will n'Ihu Mgbe Daashi Isiokwu n'okpuru
Bilie gị ná mgbakọ na mwepụ ma na eziokwu nri. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ma dị ezigbo mkpa sports ịkụ nzọ azum.
Research, nyochaa na-enyocha ihe ọ bụla mkpebi ma bulie gị ka. Fall azụ gara aga na ọnọdụ, atụle ahịa stats - eme ihe ọ bụla ọ na-ewe na-abịa dị ka a kwadebere dị ka i nwere ike.
Unu ga-ịkwada na-ada ugboro ole na ole, otú a obere nkwadebe na home ọrụ ga-enyere gị ibiaghachi nri azụ n'ime egwuregwu.
Ịghọta Ego Gị Lines
Nke a bụ maa otu n'ime ndị kasị dị irè na ugboro ugboro ji ịkụ nzọ azum eji ọbụna ndị kasị seasoned lagoro ezumike nka. Nnukwu akụkụ nke ihe ịga nke ọma sports ịkụ nzọ bụ iji hụ na ị na-mgbe na-zụọ ahịa maka kasị mma sports ịkụ nzọ edoghi.
Deba aha onwe gị ka otutu online sportsbooks. Jide n'aka na-elele kacha mma ịkụ nzọ ahịrị a na-awa ọ bụla nzọ ị na-ahọrọ na-eme ka.
Sports ịkụ nzọ Strategies Blog maka Sports.expresscasino.co.uk. Nọgidenụ Gịnị i nweta!
ịkụ nzọ Strategies | Express Sports & cha cha…